Fifamatoran'i Nylon China, fifamatorana, fiaretana avo lenta, fiarovana ny tontolo iainana fitaovana vaovao, fanitarana visy, fantsom-pivelarana, famaritana isan-karazany momba ny fifamatorana orinasa sy mpanamboatra | Boda
Ny kofehy nylon, ny fatorana, ny fiaretana avo lenta, ny fiarovana ny tontolo iainana fitaovana vaovao, ny fanitarana visy, ny fiparitahana fantsona, ny famaritana isan-karazany ny fatorana
Ny fatorana nylon dia mizara ho: fatorana nylon mihidy tena, fatorana nylon misy fehy, ny fatorana nylon mivantana, anti-disassembling (tombo-kase firaketana) fatorana nylon, fifamatorana nylon lohan-doha, plug (lohan'ny fiaramanidina). , fifamatorana nilona mahatohitra toetr'andro, sns.
Noho ny maha-manokana ny vokatra (rindrina manify, fizotran'ny tsindrona lehibe), ny fizotran'ny famolahana tsindrona sy ny fitaovan'ny fatorana nylon dia tena manokana. Ireo mpamokatra vaovao amin'ny ankapobeny dia mila fizahana fikarohana lava mba hamokarana vokatra mahafeno fepetra. Ny endrika dia manana fijanonana miverina (afa-tsy ireo karazana bokotra mihetsika), izay azo fehezina kokoa amin'ny fatorana tariby azo esorina (volo malalaka).
Ny fatorana nylon dia vita amin'ny akon'ny nil-66 nankatoavin'ny UL, miaraka amin'ny laharana faha-94v-2. Manana fanoherana asidra tsara izy io, fanoherana ny harafesina ary insulation. Tsy mora ny mihantitra ary manana fahaiza-mitantana matanjaka. Ny mari-pana miasa dia - 20 ℃ ka hatramin'ny 80 ℃ (nylon 66 tsotra). Ampiasaina betsaka amin'ny ozinina elektronika, fametahana fahitalavitra mifamatotra, solosaina ary tsipika fampifandraisana anatiny hafa, jiro, motera, kilalao elektronika ary vokatra hafa, manamboatra ny fantson-tsolika ny fitaovana mekanika, manamboatra ny tariby amin'ny sambo, manamboatra bisikileta na mamatotra zavatra hafa . Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny lahatsoratra mamatotra toy ny fambolena, fambolena ary asa-tanana. Ny vokatra dia manana ny mampiavaka ny fifamatorana haingana, ny insulation tsara, ny fanidiana tena sy ny fihikinana, mora ampiasaina sns.
Ampiasaina betsaka amin'ny ozinina fanomezana krismasy, ozinina elektronika, ozinina fanodinana tariby, ozinina tariby sy tariby, ozinina kilalao, Fetibe fety, fivarotana fitaovam-pitaterana, fivarotana lehibe, fivarotana isan'andro, kojakoja elektrika, mpampifandray ary lahatsoratra hafa.
BOSENDA TOOLS dia manome andian-vokatra vita amin'ny kofehy nylon, miaraka amina fitaovana PA66 tanana voalohany ary fihenjanana mahery vaika, ny fifamatoran'ny nylon dia alefa any amin'ny firenena maro manerantany. Ho fampahalalana bebe kokoa sy fahalalana matihanina, aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Fantsika sy fatam-bolo, fantsika simenitra, visy fanendahana tena, fantsika hexagon, foto-bolo, fantsika mahitsy, visy fandavahana, visy fanitarana, fantsika miolakolaka
Manaraka: Manitatra fantsika amin'ny visy, visy fanitarana plastika, volo fanitarana scew fantsika, clip azo ovaina